Dhacdooyinka • DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Wadooyinka Waaweyn ee Dutchtown
Dhacdooyinka gudaha June 2022
Ma jiraan wax munaasabad ah oo hadda la qorsheeyay.
Habeenka Filimka Dutchtown: Space Jam 2
Shirka Gudiga dallacaada ee Dutchtown
Bixinta Adeegyada Bulshada ee Magaalada
Shirka Xaafada Gravois Park
Shirka Gudiga Muhiimka Dhaqaalaha ee Dutchtown
Shirka Dadweynaha ee CID Cherokee Street
Shirka Gudiga Naqshadeynta Dutchtown
Rinjiyeynta Magaalada: Rinjiga Dutchtown & SIP Party
Fiiri Dalxiiska Socodka STL Dutchtown
Shirka Gudiga Ururka Dutchtown
Habeenka Filimka Dutchtown: Ku laabo Mustaqbalka
Kulankii Xaafadaha Marine Villa
Shirka Gudiga Maamulka CID ee Dutchtown
Shirka Guddiga Awoodsiinta Bulshada ee DSCC
Deriska Qaaliga ah: Dhibaatada caafimaad ee jirta awgeed, dhacdooyin badan ayaa dib loo dhigaa, dib ayaa loo dhigaa, ama waa la joojiyaa. Fadlan booqo websaydhka munaasabadda ama ka hubi qabanqaabiyaasha munaasabadda si aad u aragto haddii dhacdooyinka la taxay loo qorsheeyay inay u socdaan sidii loogu talagalay.
Markay arrimuhu caadi ku soo noqdaan, waxay noqon doontaa mid aad uga muhiimsan sidii hore in laga baxo oo la taageero ganacsiyadayada iyo ururadeenna maxalliga ah. Fadlan badbaado iyo caafimaad qabo. Waxaan rajeyneynaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan ugu laabano ganacsiga sida ugu dhaqsaha badan.
Waad ku mahadsan tahay booqashada Kalandarka Dhacdooyinka Dutchtown! Waxaan hiigsaneynaa inaan kula socodsiino dhamaan kulamada xaafadaha, barnaamijyada, fasalada, waxqabadyada caruurta, iyo dhacdooyinka kale Dutchtown, Beerta Gravois, Villa Villa, Mount Pleasant, Iyo Wadada Cherokee.
Waxaan had iyo jeer ku darnaa dhacdooyin cusub, markaa iska hubi inaad calaamadeyso boggan oo dib u hubi had iyo jeer.
Soo gudbi dhacdo
Haddii aad xaflad ku leedahay xaafadda oo aad jeclaan lahayd inaan wadaagno, fadlan nala soo xiriir faahfaahinta munaasabadda. Hubso inaad ku darto taariikhda, waqtiga, goobta, qabanqaabiyaha, iyo xiriiriye macluumaad dheeri ah marka la heli karo.
Dhacdooyinka waxaa lagu daraa Kalandarka Dutchtown iyadoo la raacayo DutchtownSTL.org iyo sida waqtiga iyo kheyraadka loo oggol yahay.
English (English) • Español (Spanish) • SomGoal rss (Vietnamese) • አማርኛ (Amharic) • العربية (Arabic) • বাংলা (Bengali) • ဗမာ စာ (Burmese) • Bosanski (Bosnian) • 简体 中文 (Chinese) • Français (French) • नेपाली (Nepali) • فارسی (Pashto) • پښتو (Persian) • Afsoomaal ah (Somali)